Saameynta qulqulka badan ee cabashooyinka ku saabsan jarista waxyaabaha dib loo cusbooneysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Bangigii hore ee Jarmalka ee WestLB, wuxuu ahaa hay'addii ugu dambeysay ee soo bandhigtay dacwad ka dhan ah Boqortooyada Spain kahor ICSID (Xarunta Caalamiga ah ee Dejinta Khilaafaadka Maalgashiga) iyadoo laga jaro mushaharka tamarta la cusboonaysiin karo ee ay fuliso Xukuumadda PP.
Tan tan, horeyba waxaa jira in ka badan 30 heshiisiin ka dhanka ah dalkeena ee ururada caalamiga ah ee kala duwan dacwadaha ay soo gudbiyeen maalgashadayaasha ajaanibta ah ee Isbaanishka: mid, ka hor Uncitral (Guddiga Qaramada Midoobay); seddex, kahor Machadka Xalinta Khilaafaadka ee Rugta Ganacsiga Stockholm, iyo 28 kahor ICSID (Bangiga Aduunka).
Tan iyo markii dacwaddii ugu horreysay, ee la xareeyay 6 sano ka hor, oo ka dhan ah dib-u-habeynta waaxda ay fulisay dowladda Zapatero illaa maanta, kaliya seddex xallin ayaa la xaliyay. Laba ka mid ah Stockholm, u roon dalkeena, iyo mid ka mid ah ICSID, kii ugu dambeeyay iyo wixii la mid ah sida looga faallooday boggan, oo ku habboon sanduuqa maalgashiga Eiser.
ICSID waxay ku cambaareysay Spain bishii May ee la soo dhaafay ganaax dhan 128 milyan oo euro, oo lagu daray dulsaar, wixii la xiriira dhimista lacagta caymiska. seddexdeeda dhirta kuleylka qoraxda oo ku taal koonfurta Spain.
1 Dhowr jaban oo aan magdhow lahayn
2 Ombudsman-ka badbaadinta
Dhowr jaban oo aan magdhow lahayn
- Miguel Ángel Martínez-Aroca, madaxweynaha Anpier (Ururka Qaranka ee Soosaarayaasha Tamarta Sawirka), wuxuu sheegayaa inay jiraan laba nuunis oo muhiim ah oo ka duwan labada abaal marin ee maxkamada Stockholm iyo tan ICSID. Dhinac marka laga eego, kiisaska Stockholm waxaa loo gudbiyay dib u habeynta waaxda ay ansixisay dowladda hantiwadaagga ee Rodríguez Zapatero iyo ICSID dib u habeyntii ugu dambeysay ee PP.
Dhanka kale, iyo tan ugu muhiimsan, dowladda Zapatero waxay magdhowday seddexdii sano ee dhimista iyadoo shan sano oo kale ay sii wadayso gunnada, taas oo ah, magdhowga wuu ka sarreeyay jarista. Si kastaba ha noqotee, Xukuumadda Rajoy ma aysan dejin wax magdhow ah dhimitaankeeda aadka u sarreeya.
Mr. Martínez wuxuu intaas ku daray, Khilaafka la cusboonaysiin karo ayaa Spain ka dhigay mid ka mid ah saddexda dal ee adduunka ee leh dacwadaha ugu badan ee laga soo horjeedo. Iyo waxa ka sii muhiimsan, Gobolku wuxuu la kulmi karaa magdhow guud ahaan gaaraya 7.000 milyan haddii inta kale ee heshiisiintu ay ku raacaan maalgashadayaasha. "Tani waxay dalkeenna uga tagi lahayd muuqaal laga xumaado."
Wasiirka Tamarta, Dalxiiska iyo Agenda Digital-ka, valvaro Nadal, wuxuu si cad u sheegay in magdhowyadan. wax badan kama walwalaan, maaddaama ay had iyo jeer ka hooseyn doonaan keydka ay keeneen dib-u-habeynta waaxda korantada.
Ka dib heshiisiinta ICSID ee ku cambaareysa Boqortooyada Spain ganaax dhan 128 milyan, Dowladdu waxay ansixisay sharci kaas oo dheeraadka nidaamka korontada loo isticmaali doono in lagu bixiyo wax badan ganaaxaa sida kuwa kale ee mustaqbalka.
Go'aankaan looma jeclayn gabi ahaanba waaxda, ka dib laba iyo toban sano oo cillad la'aan ah, nidaamku wuxuu uruursanayay tan iyo 2014 lacag dheeri ah oo ku saabsan 1.130 milyan ilaa iyo 2016. Sida laga soo xigtay dhowr urur, «Adeegsiga dheeraadka ah ee waaxda si loo bixiyo magdhawga dhimista maalgashadayaasha caalamiga ah waa wax laga xumaado.
Dhinaca kale, khilaafkan waxaa jira khilaafaad halis ah oo maalgashadayaasha Isbaanishku xilligan aysan ka soo kaban karin maalgashiga lagu sameeyay dhirta dib loo cusboonaysiin karo maxaa yeelay Maxkamadda Dastuuriga iyo Maxkamadda Sare labaduba waxay sababta dawlada, halka maalgashadayaasha shisheeye ee isla dhirtaas ay heli karaan magdhow mahadcelinta gar-qaadyada caalamiga ah (oo ay hay'adaha shisheeye oo keliya u aadi karaan).
Xaaladdaan waxaa cambaareeyay koox ka mid ah dadka ay saameeyeen Ombudsman-ka, kuwaas oo ku taliyay in Dowladda "ay qaadato tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si maalgashadayaasha Isbaanishka ee tamarta sawir qaadeyaasha ah ee arkay mushaarkooda la jaray aysan u helin daaweyn ka daran tan maalgashadayaasha ka socda dalalka saxiixayaasha ah ee Heshiiska Axdiga Tamarta.
Intaa waxaa dheer, waa inay dejiso farsamooyinka loo arko inay ku habboon tahay in lagu magdhabo allabariga keligiis ah ee isbeddelka mushaharku u muujinayo shaqaalaha. Maalgashadayaasha Isbaanishka«.
Marka laga hadlayo gar-qaadista caalamiga ah, waa in la ogaadaa inay yihiin hawlo aad u gaabis ah iyo in go'aannadooda ay yihiin kuwa ugu dambeeya. Dacwadda ICSID, 27 ka mid ah 28 kiis ayaa durba u qoondeeyay maxkamadda u dhiganta, oo la sameeyay madaxweyne iyo laba garsoore, mid xisbi walba xushay. Seddexduba waxay ka kala yimaadeen wadamo kala duwan oo aan kala fogayn. Kharashaadkii heshiisiintii ugu dambaysay ee ICSID, oo sababta u siisay British Eiser, waxay gaaraysay ku dhowaad 900.000 euro, oo 255.000 ka mid ah ay u dhigantaa madaxweynaha maxkamadda, American John Crook, 163.000 euros oo u socday garqaadaha Bulgaria Alexandrov, oo difaacay dacwad-oogaha, iyo 114.000 oo loogu talagalay ninka reer New Zealand ee McLachlan, kaasoo difaacay danaha Boqortooyada Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Saamaynta duufaanka ee suurtogalka ah ee cabashooyinka ku saabsan dhimista dib loo cusbooneysiin karo